Huayna Picchu, akụ na Peru | Akụkọ Njem
Peru Ọ bụ otu n'ime mba kachasị mma ịga leta na South America. Ọ nwere ọdịnala oge ochie na mkpọmkpọ ebe nke ọdịbendị dị iche iche dị egwu. Ikekwe mkpọmkpọ ebe kachasị mara amara bụ nke Machu Picchu, njem nke anyị niile chọrọ ime, mana anyị enweghị ike ichikota Peru na ha.
na mkpọmkpọ ebe nke Huayna Picchu Ha bụ akụ nke ndị njem nleta na-amaghị nke ọma, ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnụ ka a kpọtụrụ ha mgbe ị na-ahazi ịrịgo Machu Picchu. Ha bara uru ịmara n'ihi na dịka ndị ọzọ a ma ama bụ mkpọmkpọ ebe nke zoro ezo n'ebe dị elu nke ugwu. Are na-aga Peru? Dee ozi a ka ị ghara ichefu ya.
2 Gaa na Huayna Picchu
Ihe ọ pụtara na Quechua, asụsụ mbụ, bụ nwata ugwu. Ọ bụrụ na anyị atụnyere ugwu a na nke Machu Picchu ọ bụ a ugwu nta mana gịnị ọ nwere ụzọ dị larịị, nke dị warara ma dịkwa egwu.
Ugwu nwere 2700 mita elu ma ruo n'elu ya ọ dị mkpa ịgafe Machu Picchu n'ihi na e nwere ụzọ ruru unyi nke na-ejikọ ugwu abụọ site n'akụkụ ugwu nke mbụ. Mgbe ị hụrụ akwụkwọ ozi ochie nke mkpọmkpọ ebe ahụ, lee ugwu n'azụ ha, nke ahụ bụ Huayna Picchu. Naanị ile obere ụzọ na ọ na-enye gị vertigo mana ị ga-echeta na Incas bụ ezigbo ndị na-ewu ụlọ ma na ọ bụrụ na ha mere ụzọ ọ bụ n'ihi na ụzọ ahụ ga-agabiga.
Mara ugwu mgbe ahụ bụ akụkụ nke njem njem njem ihe ị nwere ike ime site na nnukwu ụlọ elu nke Machu Picchu. Iji mee nke a, ị ga-azụrịrị tiketi ma mara tupu oge eruo na ọ bụghị ndị niile na-arịgo Machu Picchu ga-abịarute Huayna Picchu. N'ihi gịnị? Ọ dị mma, n'ihi na ụzọ ahụ dị warara ma dị nkenke ma daba adaba maka ndị na-ata ahụhụ. E tinyewo eriri nchebe ọ bụla ma ọ ka bụ ihe ịma aka.
Na nkenke, ịrị ịrị na Huayna Picchu fọrọ nke nta ka ọ kwụ ọtọ ma ọ bụ ya mere o ji dị ebube, otu n’ime njem kachasị mma ị nwere ike ime ebe a.
Gaa na Huayna Picchu
Dị ka anyị kwuru n'elu ọ dị mkpa ịzụta tiketi pụrụ iche ma enweghị ọtụtụ. Naanị A na-ere tiketi 400 ya mere ị nwere ike nweta ya ruo ọnwa isii tupu ụbọchị ochie gị. Ma ọ bụ na ọ bụ naanị mmadụ 400 ka a na-anabata kwa ụbọchị, yabụ ọ bụrụ na ị gaa n'oge dị elu, buru nke a n'uche. Mgbe ị na-ahazi ị kwesịrị ị na-eche banyere gbaa ụgbọ okporo ígwè, nkwari akụ na nke a karịsịa, niile ọnụ.
Yabụ, nke mbụ ị ga-agarịrị Machu Picchu ma mgbe ị gagharịchara nnukwu ụlọ ahụ, ị ​​gafere ugwu, ị gafere mpaghara Huayranas ma ọ bụ Oké Nkume dị nsọ ma ebe ahụ ị ga-abanye n'ime ụlọ nchịkwa na-achịkwa ọnụ ụzọ ugwu ahụ. Ìgwè abụọ na-abanye kwa ụbọchị: otu na-eme ya n’etiti 7 na 8 nke ụtụtụ na nke ọzọ n’etiti 10 na 11 nke ụtụtụ. E kwere ka narị mmadụ anọ, ya bụ 200 kwa nnofe.
Gbakọọ a awa abụọ na ọkara ije n’agbata ịrị na ịrị elu n’agụghị oge ị ga-anọ n’elu. Ije ije a agafeghị oke ma sie ike, maka nsogbu, n'ihi na dị ka anyị kwuru, ugwu ahụ dị elu ma ọ bụ ezie na e nwere steepụ a wapụtara n'ime eriri na eriri nchekwa, eziokwu bụ na ọ naghị adị mfe, ma ya fọdụ ma ọ bụrụ na ị na-arịa vertigo. Olee ụgwọ ọrụ ndị ahụ?
Ọ dị mma bụ Lọ nke Ọnwa, bụ́ ndị a pịrị apị n'ime ọgba nkịtị. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị dị egwu n'okpuru ala na mpaghara ahụ. Ọ bụghị otu ọgba ma ọtụtụ na Incas kpuchiri iberibe okwute zuru oke agbakwunye na okwute okike. A na-achọ mgbidi ahụ mma ma ọ dị mfe iche na ọ dịghị mfe ịkpụzi ebe a. Onweghi onye ma ọrụ ya n ’ihi na ọtụtụ ihe ịchọ mma ya apụọla. Ihe ihere
Ya mere, aha eji ama ọgba ahụ, temple nke ọnwaỌ bụ ihe aka ike na ọ nweghị onye ọkà mmụta ihe ochie ịkwado ya n'agbanyeghị na ọ na-ewu ewu. N'aka nke ọzọ, ụzọ jikọtara Machu Picchu na ndụdụ Huayna Picchu na naanị otu ụzọ ya bụ nke rutere n'elu ebe enwere nkume a maara dị ka Inca oche na ụfọdụ echiche dị ebube banyere nnukwu ụlọ nke Machu Picchu na Osimiri Urubamba ya na mmiri ya na-asọ asọ.
Foto ndị ahụ na-egosi na ọ bụ ụzọ siri ike mana ọ dị m ka ị gaghị atụ uche ya n'ihi na site n'elu ihe niile panoramic echiche ọ bụ naanị ihe magburu onwe ya, ọ na-ewepụ ume gị. Chee na ị dị ihe dịka mita 400 n'elu mkpọmkpọ ebe nke Machu Picchu ...
N'elu anyị kwuru na ị ga-azụta tiketi pụrụ iche iji mee njem a. Ọnụego ya dị iche iche maka ndị Peruvian na ndị mbịarambịa. N'okwu nke ngụkọta agwakọtara Machi Picchu / Huayna Picchu na-efu sọọsọ 200 maka onye okenye mba ọzọ (ihe dị ka euro 200), yana otu narị abụọ na iri abụọ na ise maka ụmụ akwụkwọ si mba ọzọ (euro 125). Ọnụahịa ndị a bụ ndị kachasị ọnụ ahịa nke nleta ahụ n'ihi na ọ bụrụ na ị gaa Machu Picchu naanị, ụlọ ihe ngosi nka ma ọ bụ ugwu, ọnụego ahụ dị n'etiti 33 na 152 ọbụ.
Mgbe ị na-aga njem ebe a, cheta iweta akpụkpọ ụkwụ dị mma, mkpuchi anwụ, ugogbe anya maka anwụ, okpu ma ọ bụ okpu, uwe mkpuchi na-egbochi mmiri ozuzo na mmiri. Kedu oge nke afọ kacha mma iji gaa Huayna Picchu? Ọfọn, n’agbata Mee na Ọktọba n’ihi na n’agbata Nọvemba na Machị ọ bụ oge udu mmiri na nsogbu nke mmiri na-agwakọta site na ihe egwu nke mbuze ndị dị, na nwute, na-agakarị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Peru » Huayna Picchu, akụ na Peru